यी ३ राशि भएका पुरुषप्रतिको प्रेममा पागल हुन्छन् महिलाहरू, कतै तपाई त पर्नु भएन ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ३ राशि भएका पुरुषप्रतिको प्रेममा पागल हुन्छन् महिलाहरू, कतै तपाई त पर्नु भएन ?
कतिपय पुरुषहरू सधैँ यति आकर्षित हुन्छन् कि हरेक महिला उनीहरूको पहिलो नजर मै आफ्नो मुटु दिने गर्छन् अर्थात् प्रेम गर्दछन् । हामी सोच्ने गर्दछौँ कि वास्तवमा यस्तो किन हुन्छ र हरेक महिला यिनीहरूको प्रेममा पर्छन् ।हामीलाई लाग्छ कि शायद उनीहरू अरू भन्दा बढी सुन्दर एवम् आकर्षक छन् तर वास्तवमा यो कुरा पूर्ण रूपमा सत्य हुँदैन किनकी यदि
वस्तुशास्त्रमा ध्यान दिने हो भने त्यसमा भनिएको छ कि केही विशेष राशिका पुरुषहरू आकर्षणको दृष्टिकोणले बाँकी राशिको सुन्दर भन्दा सुन्दर पुरुषलाई पनि पछाडी पार्दछन् । यी मध्य सबैभन्दा आगाडी तीन राशिको पुरुष पर्दछन्, जसमा बढीजसो महिलाहरू केवल प्रेम मात्र दिन तयार नभई उनीहरूलाई पाउनका लागि कुनै पनि हद पार गर्न तयार हुन्छन् ।
घरेलु मदिरा सेवनबाट धनुषामा ५ जनाको मृत्यु, एक सिकिस्त